Akwụkwọ na-agwa nwoke na nwanyị okwu | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Akwụkwọ Na Transgenderism.
Walt Heyer biri afọ 10 dị ka nwanyị tupu iwepuga ya. O nwere otutu akwukwo gugu ede
Otu Ndò nke Grey. Onye edemede Patrick Byrne na-achọpụta na ka a na-enyocha okwu njirimara nwoke na nwanyị, ka ọ na-aghọ ihe a na-ejighị n'aka, na-edoghị anya ma na-emegiderịta onwe ya ma na-eduga n'ọgba aghara dị omimi nke iwu na ọdịbendị.
Akwụkwọ Nta Akwụkwọ Na-adịghị Anya Na Mmekọahụ na Transgender. Onye ode akwụkwọ bụ Patrick Byrne na-ajụ echiche maka echiche (“nkwenkwe ihe ọmụma” nwere atụmatụ ọchịchị) nke transgenderism.
Mgbe Harry Buru Sally - Ryan T Anderson Nwere ike a nwoke “tọrọ atọ” na a girl? Nkà mmụta ọgwụ ọgbara ọ nwere ike “dozie” mmekọahụ? E kenyere anyị mmekọahụ anyị na mbụ? Kedu ihe omume ịhụnanya kachasị mma nye onye nwere echiche dịgasị iche nke okike? Gịnị ka iwu anyị kwesịrị ikwu n'okwu gbasara "njirimara nwoke na nwanyị"?
Kedu ihe ụmụ agbọghọ na - eme - Wendy Francis. Ọ dịghị onye na-ahọrọ ma ọ bụrụ na a mụrụ ha nwanyị ma ọ bụ nwa nwoke. Na otu adịghị mma karịa ndị ọzọ. Mana enwere ọtụtụ ihe dị mma banyere ịbụ nwa agbọghọ!
Kedu ihe obere ụmụ nwoke mere - Wendy Francis. Boysmụaka nwoke toro eto wee ghọọ ụmụ nwoke. Mụ agbọghọ agaghị enwe. Nke ahụ ọ bụ ihe mere ụmụ obere ụmụ ji pụọ iche? Ọfọn, nke ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Nwere ike icheta ụfọdụ?
Ndị nkuzi Transgender Resource Pack. Anyị emepewo ntuziaka a na mmekọrịta anyị na ndị nkuzi, ndị ọka iwu na ndị ọrụ ọdịmma ụmụaka iji nyere ndị ọkachamara ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị aka ịnagide ihe ịma aka nke usoro ụlọ akwụkwọ transgender ọhụrụ na-eweta.